ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း (အင်္ဂလိပ်: Wikimedia Foundation; အတိုကောက် WMF) သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် အကျိုးအမြတ်မယူသော ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝီကီများစွာကို စီမံခန့်ခွဲနေသည်။ ဌာနချုပ်မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တွင် တည်ရှိသည်။ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ အင်တာနက် စွယ်စုံကျမ်း ဝီကီပီးဒီးယားကို လွှင့်တင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လူသိများသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားအပြင် ဝစ်ရှင်နရီ၊ ဝီကီကိုးကားချက်၊ ဝီကီစာအုပ်များ၊ ဝီကီရင်းမြစ်၊ Wikimedia Commons၊ ဝီကီမျိုးစိတ်များ၊ ဝီကီသတင်း၊ ဝီကီတက္ကသိုလ်၊ ဝီကီဒေတာ၊ Wikivoyage၊ Wikimedia Incubator နှင့် မေတာ-ဝီကီ တို့ကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ လိုဂို
စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့, ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အမေရိကန်။
ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၀၃ (၂၀၀၃-၀၆-၂၀)
အခမဲ့၊ open content၊ ဝီကီအခြေပြု အင်တာနက် ပရောဂျက်များ
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် (မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်)
ဝီကီပီးဒီးယား၊ ဝစ်ရှင်နရီ၊ ဝီကီကိုးကားချက်၊ ဝီကီစာအုပ်များ၊ ဝီကီရင်းမြစ်၊ Wikimedia Commons၊ ဝီကီမျိုးစိတ်များ၊ ဝီကီသတင်း၊ ဝီကီတက္ကသိုလ်၊ ဝီကီဒေတာ၊ Wikivoyage၊ Wikimedia Incubator နှင့် မေတာ-ဝီကီ
Patricio Lorente (ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ)
Lila Tretikov (အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ)
US$ ၄၈.၆ သန်း
၂၇၅ ဦးဝန်းကျင် (၂၀၁၅ ဩဂုတ်လအထိ)
အဖွဲ့အစည်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဝီကီပီးဒီးယား တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ဂျင်မီဝေးလ်စ်မှ ဝီကီပီးဒီးယားနှင့် အခြားသော ညီအစ်မပရောဂျက်များကို အကျိုးအမြတ်မယူသောနည်းဖြင့် ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖောင်ဒေးရှင်း၌ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၅၀ ခန့်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော် ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းကို Lila Tretikov က အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအနေဖြင့် ဦးဆောင်ကာ Patricio Lorente က ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူသည်။
၂ ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များ
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျင်မီဝေးလ်စ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရေးသားသူ လာရီဆန်ဂါ တို့သည် အင်တာနက်စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဝီကီပီးဒီးယားကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပရောဂျက်ကို အစောပိုင်းတွင် ဝေးလ်စ်၏ ဘိုးမစ်ကုမ္ပဏီမှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် အရှိန်အဟုန်နှင့်ကြီးထွားလာကာ လူသိများလာခဲ့ပြီးနောက် ပရောဂျက်ကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန် ဆိုင်းငံ့အချိန်ဆွဲခြင်းခံရခဲ့သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားအနေဖြင့် ဘိုးမစ်ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးကို လျော့နည်းလာစေသဖြင့် ဝေးလ်စ်နှင့် ဆန်ဂါတို့သည် ပရောဂျက်ကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်ရန် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ တွင် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းကို ဝီကီပီးဒီးယားနှင့် နျူပီးဒီးယား တို့ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မူပိုင်ခွင့်နှင့် ကုန်သွယ်တံဆိပ်ရုံး၌ ဝီကီပီးဒီးယား ကို ကုန်သွယ်တံဆိပ်မူပိုင် လျောက်ထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အမှတ်တံဆိပ်အား မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ခြင်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂတွင် လည်းကောင်း အသီးသီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စာအုပ်များနှင့် ဒီဗွီဒီကဲ့သို့သော အခြားကုန်ပစ္စည်းအချို့တွင် ဝီကီပီးဒီးယားအမှတ်တံဆိပ် အသုံးပြုခြင်းကို လိုင်စင်ခွင့်ပြုရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အမေရိကန် ပြည်တွင်းအခွန်လုပ်ငန်းမှ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းအား ပညာပေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများ၏ မှတ်ပုံတင်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီခြင်းကြောင့် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် သမဝါယမအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်တော့ကြောင်းကို ဘုတ်အဖွဲ့မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်အခွင့်အရေးများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်သမျှကို အဖွဲ့အစည်းတွင်း ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းအား ဘုတ်အဖွဲ့မှ တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဘုတ်အဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော် ဧရိယာသို့ ရွှေ့ပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့သည်။ စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလားအလာရှိသော တွဲဖက်များ၊ ပညာရှင်ပေါများခြင်းတို့သာမက စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့နှင့်စာလျှင် နိုင်ငံတကာသို့ အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းများကြောင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအား ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များ
ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ဝီကီပီးဒီးယားသာမက အခမဲ့ဖြစ်သည့် အခြားသော ဝီကီများကိုလည်း အသိပညာ ဖြန့်ဝေသည့်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည့် ပရောဂျက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
ဖော်ပြချက်: ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ စုဆောင်းမှု
ဖော်ပြချက်: သက်ရှိမျိုးစိတ်များ၏ အမျိုးအစားခွဲများ စုဆောင်းမှု
ဖော်ပြချက်: အသိပညာ အခြေပြု
ဖော်ပြချက်: ကျူတိုရီရယ်များနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ စုဆောင်းမှု၊ ပူးပေါင်းသုတေသနပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
အမည်: Wikimedia Commons
ဖော်ပြချက်: ဓာတ်ပုံများ၊ အသံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် အထွေထွေမီဒီယာများ စုဆောင်းထားရှိရာနေရာ
ဖော်ပြချက်: အဆိုအမိန့်များ စုဆောင်းထားမှု
ဖော်ပြချက်: ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များ၏ ဗဟိုချက်
ဖော်ပြချက်: ဒစ်ဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက်
ဖော်ပြချက်: အွန်လိုင်းအဘိဓာန် နှင့် ဝေါဟာရပဒေသာကျမ်း
↑ Cbrown1023။ Board of Trustees။ Wikimedia Foundation။ July 22, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2013 and 2012 (PDF)။ Upload.wikimedia.org။ December 14, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff and contractors page (Wikimedia Foundation website)။ Wikimedia Foundation။ August 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (ပြင်သစ်) Open for business (၂၀၀၇), Jaap Bloem & Menno van Doorn (trad. Audrey Vuillermier), éd. VINT, 2007 (ISBN 978-90-75414-20-2), p. 93. No official number available since 2006
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Neate၊ Rupert။ "Wikipedia founder Jimmy Wales goes bananas"၊ The Daily Telegraph၊ October 7, 2008။ October 25, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "The encyclopedia's huge fan base became suchadrain on Bomis's resources that Mr Wales, and co-founder Larry Sanger, thought ofaradical new funding model – charity."
↑ ၆.၀ ၆.၁ Jimmy Wales (June 20, 2003)။ Announcing Wikimedia Foundation။ mail:wikipedia-l။ November 26, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2014 and 2013 (PDF)။ Upload.wikimedia.org။ December 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nair၊ Vipin။ "Growing on volunteer power"၊ Business Line၊ December 5, 2005။ December 26, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Carlos Moncada (September 25, 2007)။ Wikimedia Foundation Moving To Another Bay Area။ The Tampa Tribune။ 28 December 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Richard Mullins (September 26, 2007)။ Online Encyclopedia To Leave St. Petersburg For San Francisco။ The Tampa Tribune။ 28 December 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Ryan (October 10, 2007)။ Wikipedia team plans move to San Francisco။ San Francisco Chronicle။
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့်ပတ်သက်သမျှကို
တမ်းပလိတ်:Freenode Wikimedia on freenode
Sheldon Rampton's 2003 post on mail.wikipedia.org
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်း ၂၀၁၀-၂၂ နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်များ၊ WMF wiki
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာ၊ WMF wiki
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၊ WMF wiki
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဌာနတွင်းနည်းဥပဒေများ၊ WMF wiki
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း companies grouped at OpenCorporates
Organizational Profile Archived 29 December 2014 at the Wayback Machine. – National Center for Charitable Statistics (Urban Institute)
တွစ်တာပေါ်ရှိ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီမီဒီယာ_ဖောင်ဒေးရှင်း&oldid=626952" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။